Onwere onye meriri Tour de France n’enweghi mmeri n’agba egwuregwu? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > 2016 tour de france win - azịza nkịtị
2016 tour de france win - azịza nkịtị
Onwere onye meriri Tour de France n’enweghi mmeri n’agba egwuregwu?
Na 1956Tour de Francebụ 43th mbipụta nkeTour de France, na-ewere ọnọdụ site na 5 ruo 28 July. Walkowiak ghọrọ onye na-agba nke abụọ, mgbe Firmin Lambot na 1922Tour de France,iji merie na-enweghịna-ewere otuogbo.
Ọ bụrụ na ị lelee anya na ngwungwu a nke ndị na-agba ịnyịnya na Tour de France, ị ga-ahụ ụfọdụ ndị kacha mma ịgba ịnyịnya ígwè n'ụwa. Back laghachila ebe a. Ha na-aga n'ihu, ma na-ezu ike ebe ndị otu ha nọ n'ihu na-arụ ọtụtụ ọrụ.
A na-akpọ usoro a edepụta ihe yana ọ na-enyere ha aka ịlanarị ọsọ izu atọ site na France. Ma naanị na akụkụ ndị a nke ụzọ a na-edepụta akwụkwọ ahụ na - eweta nnukwu ọdịiche: ogologo, ogologo na oke ugwu. Mee elu mee ala, ndị ọkwọ ụgbọala a na-erute usoro nke ha na-enweghị ike ịtụkwasị ndị ọzọ obi.
Kwesiri ịdabere n'ike gị na ntachi obi gị iji merie n'ọsọ ahụ. Nke ahụ na-eme ebe a n'elu ugwu. Ha bụ ndị kasị obi ọjọọ na-akpali akpali akụkụ nke agbụrụ na-eme ka Tour de France ndị kasị ama igwe kwụ otu ebe njem na ụwa
The Tour de France malitere dị ka nnwale siri ike iji nweta ọtụtụ akwụkwọ akụkọ egwuregwu L. maka ire ere. Akwụkwọ akụkọ ahụ nọ na nsogbu, ya mere na 1903 onye nchịkọta akụkọ ya, Henri Desgranges, haziri asọmpi ịgba ọsọ ịnyịnya ígwè nke ụbọchị 19, kilomita 2,400 n’ofe mba ahụ.
Ọ ghọrọ ihe ịga nke ọma na L'Auto mere ya ihe omume kwa afọ. Kwa afọ, ha na-agbakwunye ụzọ ọhụrụ iji mee ka njem ahụ bụrụ ihe ịma aka ma na-atọ ndị mmadụ ụtọ. Site na 1908, ahịa L'Auto nwere ihe karịrị okpukpu abụọ.
Na 1910, Alphonse Steines, otu n'ime ndị dere Desgranges, tụrụ aro ịgbakwunye ntụgharị ọhụrụ na ụzọ: tourmalet. Ọ bụ ugwu dị egwu nke 19 kilomita na 1400 mita ruo elu ahụ. Iji hụ ma nke ahụ ọ ga-ekwe omume, Steines banyere n'ime ụgbọ ala ya iji gbagoo.
Ọ gbagoro, mana ụgbọ ala ya arachiri na snow, tara ahụhụ site na hypothermia ma ọ fọrọ nke nta ka ọ nwụọ. Ka o sina dị, o zigara ozi teligram na-agụ: Tourmalet agafeela. Goodzọ dị ezigbo mma.
Zuru oke gafere. The Tourmalet mere mmalite ya na njem ahụ na 1910. Onye France na-agba ịnyịnya ígwè Octave Lapize bụ onye izizi na-aga nke ọma ịrịgo.
Mana ọ ga-arịgo akụkụ ụfọdụ ma mara ya na ọ ga-akpọ ndị isi ndị ogbu ọchụ mgbe ọ rutere ugwu ahụ. Mana o meriri njem ahụ niile ma tinye ihe akpụrụ akpụ ya n'elu tourmalet. Kemgbe ahụ, ịrị elu bụ akụkụ dị mkpa nke Tour deFrance.
N'afọ a ụzọ a nwere usoro 21 karịa ụbọchị 23. Ọ nwere 30 isi climbs; asaa n'ime ha bụ ndị kacha nwee ụdị njem ahụ. Gụnyere Tourmalet, nke dị maka oge 86th.
Karịa mmụba ọ bụla ọzọ na akụkọ ihe mere eme nke njem ahụ. N’elu ugwu ndị a, njem ahụ ga-emesị merie ma ọ bụ funahụ ya. Ndị a bụ ogologo, ewepụghị, na ugwu ugwu nke na-adịkarị ihe dị ka narị kilomita abụọ.
N'ebe a, ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-agbakọ otu ihe a na-akpọ peloton. Ọ na - enyere ndị na - agba ịnyịnya ígwè aka ịchekwa ike site na ịnọdụ ala n’azụ onye na-agba ịnyịnya ma ọ bụ ịnya ụgbọ mmiri. N’ọsọ dị elu, ndị ọkwọ ụgbọ ala na-eji ike ha niile eme ihe maka ịgba ọsọ megide ikuku ikuku.
Ma mgbe otu ọkwọ ụgbọala nọrọ nso n'azụ onye ọzọ, ị na-echebe site n'ọtụtụ ya. Nke a na - eme ka ọ dịkwuo mfe ma ị nwere ike iso ndị na - agba ịnyịnya nọ n’ihu. Iji tụọ ihe a, ị ga-elele otu ike onye na-agba ịnyịnya na-ewe.
N'ebe a na isi nke peloton, onye na-agba ịnyịnya DeFrance ga-eweta ma ọ dịkarịa ala 300 watts nke ike. M mụtara n'elu igwe kwụ otu ebe iji hụ otú ọ na-adị na naanị kilomita abụọ na 300 watts bụ n'ezie ihe siri ike. Maka ntụnyere: ọ bụrụ na onye ọkwọ ụgbọ ala nọ n’azụ ihu peloton, naanị ya chọrọ iwepụta ihe dịka 240 watts ka ọ kwaga n’otu ọsọ ahụ.
Ijide watts 240 maka kilomita abụọ nwere mmetụta dị mfe karị. Ọbụna ma ọ bụrụ na mmadụ abụọ a ga-emecha ọkwa dị kilomita 200 n'otu oge, otu ga-ada mbà karịa nke ọzọ. Ọ bụ ya mere ị ga - eji hụ ụfọdụ ndị ọkwọ ụgbọala kachasị mma na njem a.
Ha na-akpọkọta ndị otu egwuregwu ha bụ ndị ọrụ ha bụ ịrụ ọrụ siri ike ugbu a ka onye kachasị gbaa igwe kwụ otu ebe zuru ike maka akụkụ kachasị sie ike, ugwu. Ebe ha kwesiri ino naani. Mgbe peloton ahụ malitere ịmalite na-arị elu, ọ na-akwụsịlata.
Na usoro a, agbụrụ ahụ abụghị ihe na-alụ ọgụ megide ifufe dị ka ike ndọda, nke na-emetụta ndị ọkwọ ụgbọala niile na peloton. Yabụ ugbu a ọkwọ ụgbọ ala ọ bụla aghagoro ike dị ukwuu n'ihu na azụ iji nwee ike ijigide usoro ahụ. Dị ka ihe atụ, na 2010, onye Denmark bụ Chris Anker Sorensen gbagoro n’elu njem Tourmalet. “Legodị ihu Chris Anker Sorenesen.
Hapụ mgbu na njedebe ikpeazụ. Dị ka onye ndu, ọ tụpụtara usoro ije nke otu ahụ dum. Ihe eserese a gosipụtara arụmọrụ ya na njedebe ikpeazụ.
igwe kwụ otu ebe na tebụl
Ọ na-enye 415 watts ihe karịrị 11 nkeji. '... ihu nke Chris Anker Sorensen ugbu a bụ onye na-enyefe ihe mgbu ahụ n'ezie.
N'ebe a, ọ ruru ihe dị egwu 590 watts. 'ọmarịcha ịnyịnya si Chris Anker Sorenson, mana ogologo oge ka ọ ga-aga ije? “Ugbu a, lee onye America na-agba ịnyịnya bụ Chris Horner. Agbanyeghị na ọ nọ n'ọtụtụ ọnọdụ n'azụ Sorenson, arụmọrụ ya fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu.
Ọsọ ọsọ Sorenson rịgoro, ọ na-esiri ya ike ka ndị ọzọ peloton nọgide na-aga n'ihu. Ya mere, nguzobe ahụ malitere ịmalite ka ndị na-agba ịnyịnya ike na-ada n'azụ. Nke a bụ oge n'ọsọ ahụ mgbe ndị na-agba ịnyịnya kacha mma na-agbanwe site na idepụta n'ike nke aka ha ịga n'ihu.
Andy Schleck mechara wakpoo ma Alberto Contador soro ya pụọ. Ọsọ ahụ dara n'azụ ha dị ka mmadụ abụọ n'ime ndị ọkwọ ụgbọala kachasị mma ebe a: Andy Schleck si Luxembourg na Alberto Contador si Spain, bụ onye gbabara na azụ peloton n'oge ogologo oge dị larịị. Mana lee, ha agbago ọkara Tourmalet wee pụọ maka mmeri. n'ime kilomita asatọ gara aga, onye ọ bụla kwesịrị iwepụta ihe karịrị 400 watts.
Contador na akwa edo edo bụ onye ndu nke Tour de France, mana naanị sekọnd asatọ n'ihu. Nke abuo bu Schleck, onye gha anwa ida ya na ugwu a. 'Andy Schleck na-anya dị ka nwoke nwere' Ọ gara n'isi ya ruo n'isi
Schleck nọ n'aka nri. Kontador! Schleck nwere mmeri! Contador batara nke abụọ! Schleck chụpụrụ Contador n'isi nke Tourmalet site na ịdị otu ntutu iji merie ebe ahụ. Mana ebe ọ bụ na ọ tụfughi ya, Contador jigidere ndu ya niile wee merie Tour de France.
Typedị ihe nkiri a ga-ekwe omume naanị n’elu ugwu, ụzọ nke afọ a na-emekwa ka ịrịgo dị ezigbo mkpa. A na-akpọ njem nlegharị anya nke afọ a nke kachasị elu na akụkọ ntolite n'ihi ọtụtụ ịrịgo n'izu atọ. O nwere ugwu asaa a na-eme naanị n’ime otu ụbọchị.
Ọbụna mgbe ha nọsịrị ihe karịrị izu abụọ n'ọsọ ahụ, ndị na-agba ịnyịnya ahụ rịgoro mita 2,770 karịa elu oké osimiri, ebe obere ikuku na-eme ka ịrịgo siri ike karị. Nke a na - eme ka Tour de France bụrụ agbụrụ kachasị egwu na ugwu na egwuregwu a. Onye mmeri abụghị naanị onye na-agba ịnyịnya siri ike, kama ọ bụ onye nwere ike ịnagide ihe mgbu na onye mechara nwee mmeri ugwu.
Onye Kwetara 2017 Tour de France?
(udo French dị jụụ) - Nnukwu egwuregwu egwuregwu kwa afọ n'ụwa, La Grande Boucle, nke ọtụtụ ndị maara dị ka Tour de France, dị nso n'akụkụ. N'afọ a ihe niile na-amalite na Düsseldorf, Germany na July 1st. Ọ na-ewe, ma ugbu a ọ bụ usoro 21 ọdịnala karịa ụbọchị 23 nke mechara na 23rd na Champs Élysées dị egwu na Paris. - Ọ bụ agbụrụ anyị na-eso kemgbe anyị bụ ụmụaka.
Ọ bụ agbụrụ ọtụtụ mmadụ na-enwe mmasị n'ịgba ịnyịnya na mbụ, ma eleghị anya ọ bụ naanị agbụrụ ndị na-abụghị ndị ịnyịnya ígwè nụrụla. A na m agwa gi Dan, amaghi m banyere gi, mana echere m na obi uto m ka di na otu ochicho di mgbe m no ya. Eziokwu nwa ewu, weta ya - Ee, kwenye kpamkpam.
Enweghị ike ichere ka Julaị 1st ga-abịa. N'afọ a, Otú ọ dị, usoro ahụ dị kilomita 3,540, nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu afọ ahụ gara aga, ha mebiri dịka ndị a
Ọnwụnwa nke oge abụọ, nke mbụ na ụbọchị mmeghe na Düsseldorf. Otu okpukpu itoolu mara mma ma dị ka e mere maka ndị na-agba ọsọ. E nwere ugwu ise ma ọ bụ mgbanwe mgbanwe na naanị ise nke ugwu dị elu, naanị atọ n'ime ha bụ ndị bịara ugwu - ọ ga-abụ ihe mgbawa, agbanyeghị, ejiri m n'aka.
Ugbu a, ị ga-achọpụta na afọ a anyị gbanwere mmanya maka kọfị maka ngosi ngosi ngosi nke de de France. Nke ahụ bụ n'ihi na chi abọọla, anyị nọkwa n'ọnọdụ mara mma nke dị na Le Bistrot Pierre n'obodo anyị bụ Bath (egwu French) - yabụ ka anyị leba anya n'ụfọdụ isi okwu nke mmemme nke afọ a, nke, dị ka e kwuru, na-amalite n’ụbọchị nke mbụ. Nke a bụ kilomita 14 n'ogologo, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla na-enyo oge ọ bụla na Düsseldorf, site na njem mbụ nke de France gara leta obodo a, na oge mbụ njem ahụ malitere na Germany kemgbe 1987, mgbe ọ malitere na West Berlin bụ ezigbo eziokwu Dan - Daalụ enyi.
Echere m na nke a bụ ohere magburu onwe iji megharia agụụ maka ịgba ịnyịnya na ndị German, pa Karịsịa, ha nwere ezigbo ohere nke mmeri nke mbụ a ma si otú a meriekwa agba edo mbụ. - Ee, ha na-eme. Nwoke nke na-eme ya bụ ikekwe Tony Martin, onye na-agba mbọ ikpe ụwa oge anọ, onye mmeri nke oge ụwa ugbu a n'eziokwu.
Ọ bụ ezie na m ga-ekwu na ọ nwere ike ghara iwere dị ka obere. Naanị mmeri ya naanị 'ugboro atọ' na Tour de France, na nke kachasị mkpa, ọ meriebeghị oge ikpe kemgbe ọ meriri World Championship, m ga-agwakwa gị maka ya, ọ gwụchara nke abụọ ugboro atọ . Na nke ka nke, ọ bụrụ na onye dịka Rohan na-agba ịnyịnya Dennis mgbe ahụ ọ ga-efunahụ ọrụ ya - Ọ dị nwute na Rohan o yighị ka ọ ga-anọ n'ahịrị mbido, mana ọ ga-adị mma ịhụ.
Ndị ọkacha mmasị ndị ọzọ maka ọkwa izizi a ga-abụ Jonathan Castroviejo nke Movistar, Jos van Emden na Alex Dowsett ma ọ bụrụ na isi n’otu dị iche iche gbagoe. Anyị nwekwara Primož Roglič bụ onye na-aga n'ihu ịmasị otu ọ si eme mgbanwe site na ski jumper ruo oge nnwale dị egwu. Mgbe ahụ anyị nwere nwatakịrị Stefan Küng si Team BMC.
Ma eleghị anya, Michał Kwiatkowski, na Richie Porte, nyere ụdị ọ dị ugbu a, abụghị nwoke a ga-agụ maka usoro mmeghe a, n'ezie anyị ga-ekwu ọtụtụ ihe gbasara nke ahụ n'ọdịnihu na nyocha a. Echere m na onye ọkwọ ụgbọ ala ga-enwe mkpali dị ukwuu, Marcel Kittel Junior bụ, tupu ọ ghọọ ọmarịcha ịgba ọsọ, ọ bụ onye mmeri ụwa abụọ na ikpe oge ọ bụla. Ugbu a ọ mechara rụchaa sekọnd ole na ole n'azụ Roglic, nke dị ezigbo nso na nke mbido na Netherlands.
Naanị ya ga-eme ka onye mmeri ahụ dị nso taa, n'ihi na sekọnd sekọnd dị na ọkwa nke abụọ, nke ga-abụ oke ịgba na Liège. N'ihi ya, o nwere ohere na-acha odo odo jersey a corked, bespoke, wh en we think, for Philippe Gilbert. Nke mbụ, n'ihi na ọ na-amalite n'obodo ya nke Verviers.
Ma mgbe ikpeazụ, ikpeazụ n'ezie, a 1.6 km ịrị na 5,8% na-agbaru, ọ na-akpọ Le Côte des Religieuses.- A ngwa ngwa anya na mkpokọta ụzọ nke agbụrụ na-egosi na nke afọ a ụzọ bụ The ịgba ígwè- A na-atụfu mpaghara nzuzu nke ugwu ọdịda anyanwụ France.
Mana ụzọ gbadara si Jamanị pụtara na anyị nwere ụfọdụ nnukwu ụbọchị GC dị nnọọ n'isi nke ise. Maka oge nke atọ n'ime afọ ise gara aga, La Planche des Belles Filles ga-anabata ebe a na-aga. Anọ m na-atụ anya n'ọkwa a n'ihi na agbanyeghị na ọ bụ naanị obere mkpumkpu, kilomita 5.9 n'ogologo, ọ mara ezigbo mma ma ọ na - ewepụta agbụrụ dị egwu - ee, ana m atụ anya ya.
Ebe ọ bụ na abụ m ọkwa nke itoolu, nke yiri ka ọ ga-abụ kụrụ oke. I lee anya na profaịlụ a na-adị ka nke anụ ọhịa, na akpụ ikpeazụ ahụ na njedebe, ọbụlagodi acc. N'ezie, ezé shark, nke a bụ Mont du Chat nke ụfọdụ na-ekwu nwere ike ịbụ ịrị elu siri ike na France.
Echere m na nke ahụ bụ ikwubiga okwu ókè. Ọ bụ 17km ogologo ma kasị njọ niile, 8.7km kwupụta ọgwụgwụ ihe niile karịrị 10% na nkezi nke mara mma obi ọjọọ m nwere ikwu.
Ọbụna nke ka mma karịa nke ahụ, ọ bụrụ na onye ọ bụla n’ime gị n’oge na-adịbeghị anya hụrụ Critérium du Dauphiné ebe ugwu a buru ibu, ị maara na ọdịda a nwere ike bụrụ ihe na-atọ ụtọ dịka ịrịgo onwe ya. Ya mere, doro anya, dee ya na oge gị, Sunday nke itoolu nke July. Ekwesịrị m ịsị Dan, ndo, mana ọ bụghị ihe dị mma mgbe Tour de France malitere na July 1st na mgbe ahụ ihe niile ị maara bụ na ọkwa 9 bụ July 9th - Ee, nke ahụ na-arụ ọrụ nke ukwuu ruo ụbọchị mbụ nke ezumike, mgbe ọ ka O di nwute choro gi ihe nile, Simon.
Egwuregwu ugwu ahụ na-aga n'ihu na ọkwa nke 12, nke bụ isi ihe mbụ ị na-aga Pyrenees. Ma m na-atụ anya ogbo 13 karịa ọkwa ọ bụla. - N'ezie? - Lee profaịlụ.
I nwere ike iju ihe kpatara ya mgbe ị na-ele nke a. Ọmarịcha adịghị emerụ ahụ nke enweghị ugwu a ma ama, ma gbadaa gaa n'aka nri ma ị ga - ahụ na ọkwa a dị naanị kilomita 101 n'ogologo. Ugbu a, ọ bụrụ na ndị na-ebipụta akwụkwọ akụkọ anọghị ịkụ nzọ n'obere oge dị mkpirikpi dịka nke a na Grand Tours, na n'ezie agbụrụ izu nke izu bụ ihe ọ bụla mana echere, echere m na ọ ga-abụ ihe na-atọ ụtọ site na egbe iji rụchaa - echere m ị nwere ike Bịa ebe ahụ n'otu oge.
Anyị nwere ike ilepụ anya n’ihu ya, mana ka anyị ghara ile anya n’oge, Dan, n’ihi na izu ụka gara aga na-aga ugwu Alps. Oge nke 17 dị mma karịa. Anyị nwere ịrịgo nke Télégraphe, ndị Galibier, ma a ka nwere ebe mgbago na ebe ahụ, nri? - Ọzọ ịrị tupu nke ahụ, mana Galibier gafere 2,600 mita, yabụ nke ahụ bụ anụ ọhịa - ọ dịghị onye ọ bụla na agba ọzọ na-agbaji, n'ihi na ọ kwụsịrị na elu nke 14-kilometa Col d'Izoard, ya mere ọ ga-abụ ọhịa .
Ma mgbe ahụ, iji kparịa gị, mmerụ ahụ anyị, ụbọchị kachasị ogologo nke agbụrụ niile bụ ụbọchị na-esote. Enweghị ugwu, mana 222.5 Kilomita - Ma ụbọchị ikpeazụ maka ndị ọkwọ ụgbọ ala GC iji mezue Battleis Stage 20, nke bụ 22.5 kilomita onye ọ bụla na-anwale oge, ma n'ezie, ihe niile ga-ejedebe na Sprinter World Championship na Champs na Champs. Élysées na Agba nke 21 - Ya mere, nke a bụ ụzọ.
Kedu ndị ọkacha mmasị? Anyị ekwuola nkenke banyere ọkacha mmasị TT, mana gịnị banyere ndị na-agba ọsọ? Dị ka ọ dị n'ime afọ ndị gara aga, ọ dị ka atọ Marcel Kittel, André Greipel na Mark Cavendish mere ka ọtụtụ ọkwa dị larịị dị n'etiti ha ga-apụ. Ọ bụ ezie na nke ahụ abụghị ihe jọgburu onwe ya, a ga-enwe ọtụtụ esemokwu iji lee. Peter Sagan, ị nwere ike iche n'echiche, ọ ga-abụ na ọ ga-abụ nke atọ kachasị elu na ọkwa ọ bụla yana n'ọtụtụ mpaghara ndị ọzọ - Nke ahụ bụ ihe mmesi obi ike, nri? Ya mere onye nwere ike iwe iwe nnukwu aha sprinters? Ọfọn, anyị nwere ndị France atọ ahụ, ọ bụghị ha, sitere na Nacer Bouhanni, Arnaud Dém, na Bryan Coquard.
Agbanyeghị na onye ọ bụla n'ime ha enwetabeghị mmeri nke Tour de France tupu oge ọrụ ha.- Ugbu a Bouhanni nwere ike iwe ma ọ dịkarịa ala ọtụtụ ndị na-agba ọsọ ọ bụrụgodi na ọ nweghị mmeri ọ bụla.- Ọ bụrụgodi na ọ merie ọkwa, nke ahụ dị mma.
Anyị nwekwara John Degenkolb. O juru m anya na ọ nwetụbeghị mmeri nke Tour de France. Ọ na-atụ anya ịgbanwe ọtụtụ ebe nke abụọ ka ọ bụrụ otu mmeri.
Alexander Kristoff nke Team Katushawho emeriworị mmeri nke Tour de France. Na mgbe ahụ, anyị enweghị ike ịgụ Michael Matthews, Dylan Groenewegen ma ọ bụ Sonny Colbrelli. Mana ọ dị ka anyị agaghị eme ya.
Onye ọ bụla na-eto eto upstarters nke meriri Applecart ebe a na njem dịka anyị mere na Giro d'Italia - Mba, ọ bụghị, ndị na-agba ọsọ, ihe niile dị mma na ihe dị mma gbasara isi ihe omume? Onye ga-emeri Tour de France kpam kpam? Chris Froome, onye na-agbachitere onye mmeri, malitere dị ka ọkacha mmasị nke onye na-ede akwụkwọ, mana ọ bụ naanị obere, na e nwere ihe abụọ kpatara nke a. na nke ahụ bụ ihe ịtụ n’anya n’ihi na n’ime agbụrụ atọ gara aga mgbe ọ meriri agbụrụ a, ọ gaara emeri agbụrụ ise opekata mpe n’oge a. Ma nke abụọ, ọ bụ n'ihi na Richie Porteis na-enwu ọkụ. - O doro anya na, ọ bụghị ya? N'adịghị ka Froome, ọ nweela mmeri isii dị elu na 2017.
Kedu ebe anyị na Richie Porteis ga-echeta na ọ nọghị n'elu ikpo okwu site na njem isi na mbụ. N'ihi ya, ọ ka ga-egosipụta onwe ya. Ọ ghaghị igosipụta onwe ya.
Ọ gbagoro kpamkpam na ekwesịrị ịsị na nyere ihe ndị mere n'oge na-adịbeghị anya, o nwekwara ezigbo ohere iji fee na oge ikpe ya, na 32 ị na-eche ma ọ bụrụ na nke a bụ ohere kachasị mma iji merie Tour de France mgbe ọ bụla. - do na-eme, ọ bụghị gị? O doro anya na ọ bụghị agbụrụ ịnyịnya abụọ n'elu ikpo okwu ọ bụ ezie na - anyị nwere Astana duo Fabio Aru na Jakob Fuglsan g, ha jiri mmekọrịta ha mee ihe na mbibi na nso nso a Critérium du Dauphiné, nri? Mgbe ahụ, anyị nwekwara onye na-agba ọsọ nke afọ gara aga, Romain Bardet. Anyị nwere onye mmeri mbụ Alberto Contador Esteban Chaves, n'agbanyeghị na anyị meriri mmerụ a dị oke egwu nke gbochiri oge opupu ihe ubi.
All kpochapụrụ Dauphiné, mana otu nwoke, ọ bụghị otu nwoke, nri? - Mba, ọ bụkwa onye otu Alejandro Valverde bụ onye ị na - enweghị ike ịpụ, mana nwoke anyị na - ekwu maka ya, ị maara n’ezie, ọ bụ Nairo Quintana. Ugbu a amaghị m ihe m ga-atụ anya n'aka nwoke a na July. Echere m na ị nwere ike ile ya anya n'ụzọ abụọ.
Nke mbu, nke a bụ nke anọ ọ na - eme njem nlegharị anya nke mere na ọ mere njem na afọ gara aga, Vuelta, mgbe ahụ Giro, ma ugbu a, ọ laghachiri na njem ahụ. Ya mere ọ ga-abụrịrị ike gwụrụ na ike gwụrụ, nri? ? - Ọfọn, ị gaara eche otú ahụ. Aga m eme nke ahụ. - Isi okwu nke ozo bu na njem nke abuo ya nke oge a nwere ike buru ihe kacha mma.
N'afọ ahụ, ọ gwụchara nke atọ na njem ahụ wee merie Vuelta. O mechara nke abụọ na Giro n'afọ a, yabụ ma eleghị anya nke ahụ bụ ihe na-ekpo ọkụ maka Tour de France. Enwere m olileanya na anyị ga-ahụ onye kacha mma na July a n'ihi na ọ gwụchara nke abụọ na Giro ma sie ike ebe ahụ, ọ dị ya ka otu n'ime turbos ya na-akwụsị ịrịgo.
Anyị ahụbeghị nke kachasị mma ya - Ee, enweghị m ike ichere ịchọpụta ihe ọ na-eme. Ugbu a anyị gabigara ndị ọkacha mmasị, ọ nwere ike bụrụ oge itinye Dan na GCN nsusu ọnụ ọnwụ n’onye ọ bụla anyị chere ga-emeri. Oge erugo maka amụma ọjọọ. (Egwú Dramatic) - Vincenzo Nibali agaghị arịgo n’elu ikpo okwu. (Ikwughachi) - Onye mmeri ga - ab
Chris Froome. (Egwú egwu) Peter Sagan ga - emerikwa akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na - acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ - Ọfọn, nke ahụ na-ekwughi. Ma Froomey. ..- Yup.M na-eche na n’agbanyeghi n’afọ a egosighi ụdị ọ dị na mbụ tupu mmeri ya gara aga, mana ọ nwere ahụmịhe a nke mmeri na anyị hụkwara ya ka ọ na-atụba mgbede mgbede na ahịrị .
Ọ bụghị iwu ka o merie n’elu ugwu, ọ dịkwa naanị atọ n’afọ a. Echere m na anyị ga-ahụ Froome yiri nke afọ gara aga, ebe ọ na-agba mbọ ụzọ dị iche iche iji were oge ndị ya na ya ga-agba. (Simon rie) - Me na m na-adọka kpamkpam - na m na kpam kpam
N'ezie, Nairo Quintana. (egwu dị egwu) - Ooh. - Eeh.
Peter Sagan maka ndị Green. Echere m, dịka ị kwuru na mbụ, Nairo Quintana yiri ka ọ rụọla nke ọma na nke kacha mma na Grand Tour nke abụọ nke afọ. Ya mere echere m na o mere.
M ga-asị Richie Porte, mana eziokwu ahụ bụ na ọ gwụchabeghị n'elu ikpo okwu na Grand Tour nwere nchegbu m. Yabụ ee, Nairo Quintana N'ikpeazụ ihe ha na-ebu n'afọ a - nke atọ ga-abụ Richie Porte; na ọkwa nke abụọ Maazị Nairo Quintana; na onye mmeri, n'echiche m dị umeala n'obi, Mr.
Chris Froome. (Dramatic music) - Hi ụmụ okorobịa, echere m na onye mmeri niile nke Tour de France ga-abụ
Richie Porte. (Dramatic music) Nye m onye mmeri nke akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ
Onye ozo? bụrụ Peter Sagan - Chei. Oge ga-egosi onye n'ime anyị ziri ezi, ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla, ikekwe ọ bụghị n'ime anyị. Ma anyị niile họọrọ Peter Sagan iji merie njikọ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ jersey na amụma ahụ. - Anyị abụghị ezigbo - Mana ọ pụtara na anyị nwere olile anya na ị na-eme ihe dị mma, ma ọ bụ na ọ ga-egosi na enwere ọbụbụ GCN n'ezie.
Ga-enwe obi amamikpe ma ọ bụrụ na ọ merieghị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ahụ? - Achọrọ m ịlụ, aga m enwe ezigbo obi amamikpe. - Echere m na m, echere m na m ga-enwe obi amamikpe. - Ọ dị mma, mgbe ahụ, anyị ga - ewere obere nsogbu ahụ, mana ọzọ karịa nke ahụ, ana m atụ anya na mwepụta ahụ ugbu a.
Ma n'ezie Tom na m ga-anọ ebe ahụ na-eme ọtụtụ ọdịnaya maka GCN, yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ihe, ka anyị mee ya na ngalaba nkọwa. Anyị ga-eme ike anyị niile iji nweta ya. Anyị enweworị ọtụtụ tọn ihe ndị mara mma.
Ka ọ dịgodị, Dan na Matt ga-anọrịrị na Maratona dles Dolomites, nke m na-enwekwara anyaụfụ. Ọ bụrụ na m ga-anọ naanị ebe abụọ n'otu oge.- Nwee obi uto ile anya ya.Ọ bụrụ na ị nwere amụma nke gị nke dị iche na nke anyị, nweere onwe gị ịgwa anyị na ngalaba nkọwa n'okpuru ị ga-ahụ na
Lasty, ndo Dude. Si na m na-eyi t-Chiefs odo odo pụrụ iche dị na shop.globalcyclingnetwork.com, njikọ ị nwere ike ịchọta na ihuenyo ahụ iji denye aha na ọwa ahụ ma ọ bụrụ na ịnweghị.
Naanị pịa ụwa ka ị mee nke ahụ. - Ma ugbua ọ bụrụ na ịchọrọ ị nwetakwu ọdịnaya, lelee ihe ngosi GCN na mbụ. All ozi ọma nke izu na ndị ọzọ, nke ahụ bụ dị nnọọ n'ebe ahụ.
Ma mgbe agụụ gị maka ụfọdụ chọrọ ịme GCN Grand Tour ọdịnaya, pịa ala ebe ahụ maka njem njem ụgbọ elu Team Sunweb na Matt.
Onye meriri Tour de France 2014?
Tour de France 2017/Ndi mmeri
Ndị mgbasa ozi America na-egosi enweghị mmasị n'egwuregwu, nke ọ na-aghọtaghị nke ọma na enweghị mmasị gafere naanị site na enweghị mmasị gbanahụ ndị na-ege ntị na-eri oge ịgba ọsọ na-agbafe na ụgbọ ala ndị Europe Thomas Vogler na-eche banyere onwe ya nke nwatakịrị na-enweghị isi na onye otu. onye nwere ike inweta uru aghụghọ na mwakpo igbu onwe ya nkeji itoolu na ọkara ka emechara na njedebe nke ụwa awayRJD na-aga n'ụlọ na anya anya Enweghi ike ijide otu cgc ahụ na-ekwu okwu banyere ihe na-adịghị mma ọchịchọ na-adịghị mma Asarco's Michael Rogers maara ọgbụgba mkpụrụ nke mkpụrụ ahụ ma nakọtara ebe Venus na-emebi ihe 17 kwuruQueen ogbo ọzọ ihe ngosi nke ihe omume na-ere ọkụ homoerotic n'okpuru masochistically mgbe Katyusha agbagharala ezumike ahụ, ndị na-agba ịnyịnya mpaghara na-agwụ ike tupu nrịgo nke mbụ nke Gambit rụzuru na Rodriguez na-atụgharị n'oge na-adịghị anya megide ugwu elu ugwu ikuku na-egosi na ọ ga-abụrịrị nke kachasị dị elu na iche ụfọdụ nchegbu kwa ụbọchị banyere ọdịda na igwe mmegharị isiokwu dị ka ihe nkiri kpakpando GiovanniVisconti na Bar Day tụbara onwe ha. na Roles karịrị ike ruo mgbe Realpolitik Pinkus axis Rafa Myka na Thibaut Pinot fdj commteam mebie ọgbụgba ahụ dị iche iche na ọ kwesịrị ka akara ngosi daa kama Jean-Christophe Peraud onehitches onye otu abụọ nke Visconti bụ Ravel ụbọchị tupu ọ bụ naanị fah rer, onye na-ekwusi ike nkà nke Scientology, ya na agbụrụ onye ndu vincenzo nibaliahead glimmer anya visconti wee nweta kmmwin ihe karịrị otu kilomita ma mechaa 43 sekọnd tupu GC duo arụmọrụ nke ọkachamara ga-ahapụ naanị 32 sekọnd n'etiti ọnọdụ a na nke anọ nke ugwu niile akụkụ akwụkwọ mbụ na-arụ ọrụ, yabụ kedu ka ọ ga-esi bụrụ ihe ijuanya n'okporo ụzọ siri ike dị otú a nke m na-anya onwe m na otu onye otu egwuregwu yiri ka ọ dị njọ na ụgbọala ndị Europe na-echebe ọkwọ ụgbọala Bernie na-enyeghachi nkwado na nkwado dị mma nke di ma ọ bụ nwunye hapụrụ ọzọ Enweghi uche n'etiti transmitter Butwell Valverde tinye na n'ala Ọ dịghị agbaji si Astana na blinking glances, ee ọbụna lampreys Kris Hana akara akara ụzọ mgbapụ n'ụzọ dị oke oke n'ihu na kwa tere n'okpuru iji kpasuo Jeremaya mere dị nnọọ mkpa a usoro iwu mgbakọ na mwepụ iyi egwu na microscale M anyị agbụrụ Na mbụ, ọ dị ka a ịlụ ọgụ maka ọsọ mcs TJ van Garderen sikwa ebe ahụ, ma ike gwụrụ Valverde na-eme ya onye na-achị eze n'ọsọ nke abụọ n'azụ na-egbu ndị mmadụ atọ na-ejide Micha, bụ onye wakporo mbubreyo, mana naanị site na ịba ụba P-imi anya na oge a na-ahụ maka oge na-aga nke ọma, ọ bụ ezie na ndị na-agba ịnyịnya na-agba ọsọ Valverde 19th na mkpokọta ọhụụ bụ ụbọchị nzuzu na-enweghị nsonaazụ na nkwụghachi nke Eluigwe na Ala na-abịa mgbe Chillingrain sprinter team na-ekpe ekpere maka ezumike a na-ahụ anya na ijide oghere dị na mbubreyo ịrị elu Giant Shimano's Marcel Kitteland chọrọ uwe ominous Navodaus Costo kụrụ ndị otu ya na warara, okporo ụzọ na-eju iwe nke enweghị itinye aka na ịchụ, a na-eme ihe ndị na-adịghị mma egwuregwu. enwekwu obi iru ala dị ka mkpọka a na-apụghị ịkọwa akọwa na kilomita ndị ikpeazụ na-achịkwa ndị nwere ike ị nweta mmeri ga-abawanye oghere nke mmeri a d ịrịrịrịrịrịrị site na mbọ siri ike iji nweta GC.
Oge ikpe abụghị ụzọ eziokwu. Rolgbagharị otu awa n'etiti 100 na 200 mita bụ mmeri dị ka a ga - asị na m nwere ihe nkiri Fitzcarraldo na - enweghị ezigbo ụgbọ mmiri na - ebu ụgbọ mmiri site na Amazon ọ na - ekpebi ebe kachasị mma etinyere ụfọdụ Martin meriri ebe ọkara ọkara elekere tupu onye ọ bụla n'ime ha ahapụ. Anyị nwere ike ịkọwa esemokwu ndị dị na mbụ, na-ewere Pinot na amamihe nkịtị ọ dị ka ọ metụtara naanị NetApp's Leopold Corning, onye na-amụ teknụzụ ma nyefee ya ndị ọkwọ ụgbọ ala Belkin, ya na ebe nke anọ - nkeji abụọ n'azụ oge echefu echefu Coda na Denim on Anyị na-achọ imechi akụkọ abụọ esorowo na okpomọkụ nke njedebe, mana ọkụ ọkụ nke Leaks Dominance wee bụrụ ihe nchara nchara a na-ese foto na ọbụnadị asọmpi ndị a juputara n'ememe ndị dị ugbu a kilomita 60 site ụlọ ọrụ Chuck naanị olu ezigbo ya. , ma ebe ọ bụ na aka akara aka na-ewepụta ezigbo ihe nkiri, ị naghị enwe afọ ojujuIhe mgbochi nke ihe ngosi a anaghị akwụ ụgwọ, couture na-egosi AlexanderChristophe, onye ga-alụ ọgụ na nke ya ọzọ, mana ọ ka na-abanye na nke ikpeazụ a na-arịgharị na Lotto Sonzai Grabon ihe gbagọrọ agbagọ nke dị mwute maka r Christoph na-amalite ịgba ọsọ ahụ na isi isi ike yana mmetụta dị egwu nke izere ihe dịka ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye karịrị ya.
Ihe omume Kitto dara n'ọhịa na mita ikpeazụ, mana ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mkparị na Satọdee, n'ụzọ doro anya, na-enweta mmeri nke isi ihe dị egwu na ọrụ ụrọ nke Tour de France bụ am Verner Herzog na otú ahụ ka agbụrụ nke
Nye ghọrọ aghụghọ na Tour de France?
PARIS -Vincenzo Nibalipụta na Sọnde dị ka onye mmeri mbụ nke oftali nke Tour de France na 16 afọ mgbe agba ọsọ akọwapụtara site na ihu igwe na-ewe iwe na iwepụ ihe mgbu nke ọkacha mmasị ndị ọzọ.Jul 27. 2014
Okporo ụzọ anyịnya igwe na zoro ezo Motors abụghị kpọmkwem ọhụrụ, ma na a Prorider dị nnọọ jidere mpi na otu, anyị kwubiri na ọ bụ oge na-agbalị otu maka onwe anyị. Kedu ka igwe ịgba ọsọ na igwe zoro ezo na-eche yana ọsọ ọsọ anyị ga-agba ya? ♪ ♪ - Gini ka anyi nwere ebe a? Nke a bụ otu n'ime igwe kwụ otu ebe izizi ebe a na UK iji gosipụta moto zoro ezo. A na-echekwa ya ebe ahụ na tube oche ma na-eme ka ihe mgbakwasị ụkwụ dị n'okpuru site na pinion na Dan nwere ike gbanwee ya ma gbanyụọ ya site na njikwa aka - Batrị dị ebe a, n'ime karama ahụ, ị ​​nwere ike ịnweta batrị ndị nọ n'okpuru ebe a oche oche na-ezo n'elu engine ya onwe ya, ma ndị dị obere karị, o nwere a obere mkpumkpu na-agba ọsọ ma ọ bụ na-akwọ ụgbọala oge.
Ya mere, anyị na ajụjụ na-ere ọkụ mgbe ahụ. Ike ole, ọ na-adị ka ọ dị ize ndụ otu anyị siri guzoro ebe a, ike ole ihe a ga-agbakwunye? O doro anya na n'agbata otu na 200 watts maka otu awa.- Ee, echere m na ezigbo ìgwè anyị ga-esiri anyị ike karị. ♪ - Olee otú ọ na-adị n'okporo ụzọ mgbe ahụ? Ọfọn, na-amalite na, anyị na-now na-aga na 25, 30 km kwa awa.
Ma ọ bụghị na. Enweghị m ike ịnwe mgbochi ọ bụla site na injin ahụ belụsọ ma m laghachi azụ, nke dị ntakịrị. Gịnị na-eme ma anyị gbanye ya? Ka anyị gaa.- Aga m ahapụ gị ka ị gaa n'ihu ugbu a Si.- Ọ dị mma, dịkwa mma enyi.
Ugbu a, ọ bụ mmetụta dị ịtụnanya n'ihi na moto ahụ nwere oke ịgba na etu o siri agba ọsọ na cranks, nke dị nwayọ nwayọ na 86 RPM, mana ọ bụ naanị ebe ahụ n'azụ, na-ewere ya ka m wee nwee ike. ..ma ihe m na-ekwu, m nọ na 50-11, anaghị m eme ọtụtụ.
Dan, ị na-eme ọtụtụ azụ n’ebe ahụ? - Ọ dịghị njọ. - Yabụ eziokwu na enweghị m ike ịgbanye ngwa ngwa ngwa ngwa ọ bụla dị ntakịrị, mana anyị na-aga ngwa ngwa. ♪ - Ọ dị ezigbo iche na igwe eletriki ọ bụla m na-ebugharị ebe ị na-agagharị n'oge gara aga ma ị nwere ike ịnwe mmetụ moto na-enye obere oge ọ na-eche n'ụzọ dị ka ihe ọzọ na-agba m ụkwụ. - M nwere ike iso na 200 watts, - Dị nnọọ gbatịa a bit. - Ọfọn, ugbu a ọ bụ nke m ime ka m nwee obere ihe mgbu n'akụkụ, m hụkwara ya n'anya.
The ajụjụ, Otú ọ dị, bụ ma m na-eche nke a akpan akpan usoro a na-eji na Pro Pedalthon tupu. Echere m n'eziokwu na a hụla ya ugbu a na-agba ọsọ na nnukwu agbụrụ agbanweela ma gbanwee echiche m, mana mgbe m chere banyere nke a, ọ ka siri ike ikwenye ya ka m wee nụ na n'akụkụ m nke ọma ugbu a na m na-eche na nke ahụ ga-abụ otu ihe ahụ dị n'etiti a pedal hoot. Ya mere, ha nwere ike nwetụ nwayọ, ha nwere ike ịbụ ọkaibe ugbu a na 2016, mana asịrị ahụ malitere ịmalite afọ ole na ole gara aga yabụ na ihe a nwere ike ịbụ ọnọdụ nka n'oge ahụ.
Ugbu a dị ka Si. Dịka anyị kwurula, nke a bụkwa usoro ịrị elu, nke pụtara na arụmọrụ na-amalite na cadence n'okpuru 86. Ugbu a, o doro anya na ọ dị otu maka ala dị larịị, nke pụtara na mgbe ọ ruru 100 ọ ka ga-enye gị ụfọdụ ume.
27.5 x 3.0 taya
Nke ahụ ga - abụ ihe ezi uche dị na ya ma ọ bụrụ na ị na - agba ọsọ n'ihi na n'ezie ọfụma m masịrị maka ịrịgo dịka nke a ga - abụ 90, ma ọ bụ ikekwe ọbụlagodi otu narị. Yabụ, nkata m ka bụ mba, opekata m ike na nke ahụ bụ olile anya m.- Otu ajụjụ ikpeazụ a ga-aza, Kedu ka igwe ọrụ a si arụ ọrụ? Ugbu a, anyị maara na ọ bụ ihe dị ka 150 watts, anyị tụrụ ya site na ike-mgbata n'azụ wheel, ma anyị na-na na gafee a karịsịa mkpari ọrịrị na ndịda nke England Mr.
Lloyd nwere n'ezie Eze nke Ugwu na, ihe ọ bụ onye mere njem nke Britain na 2011. Ya mere, anyị bụ, afọ ise mgbe e mesịrị, afọ atọ nke ezumike nká. Nwere ike Dan agbaji KOM ya? - Ka anyị chọpụta.
Ya mere, ọ bụ oge eziokwu, n'ihe dị ka mita 100 m ga-atụgharị aka ekpe, m ga-eme ka injin m rụọ ọrụ ma hụ ma m nwere ike iti onwe m aka. ♪ ♪ Yabụ, anyị anọghị nso site na elu ọzọ, Steve nọ ebe ahụ. O nwere ihe niile n’azụ ya ugbu a.
Oh enwere m ike ịhụ na m na-echeta otu ihe siri ike na nke ahụ. Ma anyị nọ n’ebe ahụ echere m - N’aka, ọ bụ oge maka nsonaazụ. Dan, olee mmetụta ị na-enwe? - A obere zuru ike, ma m bụ nnọọ keokuko.
Echere m na ọ na-egosi na ịmalite adịghị mfe ọ bụla, ị na-anya ngwa ngwa na nke ahụ bụ otu ihe dị ka injin yana ịnwe ọkụ. Ya mere dabara Dan, ọduọ Dan, mere 7:02. Dan lara ezumike nká na Amotor, ọ ka ji nkeji na 14 sekọnd nwayọ - otu a ka ịnyịnya ibu si aghọ agbụrụ - na ị dịbu mma. - Ee - Aka nri, echere m na ajụjụ bụ mgbe ahụ ka ndị na - ele anyị anya ga - azụ ma jiri igwe zoro ezo zụta igwe agba ọsọ? Oh na mgbakwunye, ụgbọ mmiri a ga - enweta ọtụtụ, ọtụtụ injin doping n'ime afọ ole na ole sochirinụ? - Eeh, ajuju nke mbu dabere na ihe kpatara in’eji n’aga igwe gi.
Echere m, ọ bụrụ na ị hụrụ mmetụta nke ibu ọnụ n'anya, ma ọ bụ oge ọ bụla ị na-apụ, ọ na-esiri gị ike ijide ndị ọkwọ ụgbọ ala gị nwere ike ịbụ ndị na-eto eto, ọsọ ọsọ, ma ọ bụ nwee oge iji na-eme ihe karịa gị, mgbe ahụ, eche m n'echiche . - O nwekwara ike ịrụ ọrụ ụzọ ọzọ. Yabụ ọ bụrụ na ịnwere onye ọrụ ma ọ bụ enyi nwanyị na-arụ ọrụ nke malitere ịgba ịnyịnya ígwè, ma ọ bụ ikekwe di ma ọ bụ nwunye na-esiteghị ka gị, ma ọ bụ ikekwe nwa nwoke ma ọ bụ nwa nwanyị nọ n'afọ iri na ụma nke na-enweghị ike ijide onwe gị, nye ha a igwe kwụ otu ebe nwere igwe zoro ezo n'ime ya bụ ụzọ dị mma maka unu abụọ iji nweta ihe dị na njem ahụ, jiri ezigbo otu mbọ, mara mma na mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ha nwere ike ijide nke ọma. - Ma gịnị banyere echiche nke iru ihe? Nke a bụ ihe ga-adị anyị niile mkpa n’oge ụfọdụ ka anyị chee ya ihu, mgbe ịnwere injin ya, ọ bụghịzị KOM gị ị ga-enweta ma ọ bụ enwetaghị.
Ọ bụghị gị ka ị ga-emeri ugwu ma ọ bụ chịkwa otu ịnyịnya mpaghara. Yabụ, ọkachasị ma a bịa n'ịrụ ọrụ, ọ bụ ụdị ihe dị mkpa ka anyị niile jiri igwe kwụ otu ebe, ọ bụghị ya? Na nke ahụ kpam kpam ugbu a. - Ee, ka anyị chee ya ihu, onye ọ bụla chọrọ ịga ọsọsọ nwere ike ịpụ zụta ezigbo ọgba tum tum kama ịnwe igwe zoro ezo dị ka nke a, yabụ echeghị m na anyị ga-adị ọtụtụ ichegbu onwe gị ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ndị a ga-adịkarị ntakịrị na ọha mmadụ na afọ ole na ole sochirinụ, ọ bụrụhaala na a na-egbochi ha asọmpi ọ bụla.
Ee, ma ọ bụrụ na ha na-ewetara ọtụtụ mmadụ ọrụ ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ site na igwe kwụ otu ebe, nke ahụ bụ ihe dị mma. Ma ọ bụ ọ bụrụ na ọ na-enyere ọtụtụ mmadụ aka ịpụ apụ na ịnya ụgbọ ala ma nwee ọ itụ na ya, mgbe ahụ ọ bụ ihe dị mma. Echeghị m na ọtụtụ ndị nwere igwe zoro ezo ga-egosi agbụrụ otu mpaghara ha ma ọ bụ ndị otu agbụrụ na-agba ịnyịnya, ọ bụ ezie na onye nzuzu ma ọ bụ abụọ ga-adị mgbe niile - ihe dị egwu bụ Si, nke ahụ bụ ezigbo iwe na-agba ịnyịnya nwetara n'ezie abanyela aka na onye- - Amaghị m onye gaara eme ya.- Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ Col de la Madone zuru oke nke ị mere na igwe eletrik, ịnwere ike ịchọta ya ebe ahụ.- Ma ọ bụ ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịchọta ihe ngosi GCN kachasị ọhụrụ ebe anyị na - eme ka ị dị ọhụrụ na ihe niile Top Gun n’ịgba ịnyịnya ike ị nwere ike ịpị ebe ahụ n’okpuru - Anyị nwere ihe abụọ ịchọrọ ịme tupu ị lelee otu n’ime isiokwu ndị a.
Nke mbụ bụ ịdenye aha site na ịpị bọtịnụ a ma ọ bụrụ na i nwebeghị. Nke abụọ bụ inye anyị isi mkpịsị aka ma ọ bụrụ na isiokwu a masịrị gị.
Peter Sagan ọ ga - emeri Tour de France?
N'agbanyeghị nnọọ parcours dị iche iche,Sagannwere ike ịlaghachi dị ka ọkacha mmasị. O nwere ike ọ dị ka ọ dịmerieebe obula. N'agbanyeghị na ọ dị naanị afọ 27Saganekwuola ọtụtụ agbụrụ dị egwu otu ụbọchị, yana ugboro abụọna-emeriWorld Championship, na ijide utu aha na ọgba tum tum na cyclocross.
Gịnị mere ndị na-agba ịnyịnya ígwè ji agba ịnyịnya ígwè?
Na a ụzọ ịnyịnya ígwè agbụrụ, naplatoon(site na French, nke pụtara 'platoon') bụ isi otu ma ọ bụ mkpọ nkendị na-agba ịnyịnya.Ndị na-agba ịnyịnyana otu zoputa ike sitena-agba ịnyịnyamechie (ide ma ọ bụ ịmịpụgharị) na (ọkachasị n’azụ) ọzọndị na-agba ịnyịnya.
Kedu onye na-agba ịnyịnya Tour de France kachasị ukwuu?
Ndị na-agba ịnyịnya Tour de France a drinkụ mmanya?
Ruo ogologo oge, ruo na 1960, ọ bụ ihe nkịtị makatour de France ndị na-agba ịnyịnyaslug aụọ ihe ọ .ụ .ụnkemmanyan’oge ọsọ ahụ. Ọbụghị naanịmerehana-a alcoholụ mmanyaime ka ihe mgbu ghara iju ha mana ha weere ya dị ka ezigbo arụmọrụ. Dị ka ị maara na a machibidoro ndị na-akpali akpali iwu na otu ammanyan'ikpeazụ n'ihi na e weere ya dị ka ihe na-akpali akpali.
Kedu onye kacha agba ịnyịnya agba niile?
N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe, Eddy Merckx bụkasị ukwuu na-agba ígwè niile oge. Nwoke a na-etu aha 'The Cannibal' bụ onye isi ọkachamaraịgba ígwèdị ka onye ọ bụla ọzọ ma merie agbụrụ dị mkpa ọ bụla ga-emeri.Sep 22 2017